Toronto Raptors oo hanatay koobka NBA-da – LaacibOnline
Football News: Sheffield United v Liverpool
Ciyaaraha NBA-da ayaa marka ay laba koox isugu soo haraan finalka ama ciyaarta kama danbeysta, waxaa la ciyaaraa 7 jeer oo kala bax ah oo ay ku hardamaan labada dhinac.
Ciyaarti xalay ayaa aheyd tii lixaad ee ay labadan koox isku arkeen finalki sannadkaan. Waxaana 4 jeer badisay kooxda Raptors, sidaasina ku hanatay kooxda.
Toronto Raptors waxay sidoo kale noqotay kooxdi ugu horeysay oo ka socota Canada oo qaadda koob weyn, tan iyo sannadki 1993-ki, markaas oo ay koobka kubadda koleyga ee caalamiga ah ay qaadday kooxda Toronto Blue Jays.
Tartanka NBA-da ayaa waxaa ciyaari jiray kaliyah kooxaha Mareykanka, balse waxaa lagu soo biiriyay kooxaha dalka Canada, sannadki 1995-ki markaas oo la aas aasay kooxda xalay koobkan qaadday ee Toronto Raptors.
Ciyaarti xalay, laacibka kooxda Raptors, Kawhi Leonard ayaa loo magacaabay ciyaaryahanki ugu wanaagsanaa finalki xalay.
Kooxdi kaalinta labaad gashay xalay ee Golden State Warriors, ayaa afarti sano ee lasoo dhaafay qaadday koobkan saddex jeer. Labadi sano ee lasoo dhaafay iyada ayaa isku xiriirisay.
Ugu danbeytni, dabaaldagyo waa weyn ayaa xalay ka dhacay magaalada Toronto, taasoo ay taageerayaasha iyo dadka magaalada ugu damaashaadeen koobki ugu horreeyay ee ay kooxdooda Raptors ku guuleystay.
← Mediators optimist about TPLF leaders,Abiy Ahmed team negotiation
Jimco, Jun 19, 2020-Dowladda Tanzania oo gashay heegan xooggan , kadib hanjabaad uga timid koox jihaaddi ah oo ka dhisan Mozambique →
Scores of Yemeni refugees, mostly women, and children, arrived in Somalia’s coastal city of Bosaso, Somali authorities announced on Wednesday,